Mukadzi anoona kuti anotambura ne supraventricular tachycardia nekuda kweApple Watch | Ndinobva mac
Apple Watch yave kuita kubvira payakasvika pamusika munaKurume 2015, chishandiso chiri kubatsira kwete chete kugadzirisa hutano hwedu nekutikurudzira kufamba nguva nenguva, asi chazovewo chishandiso inokwanisa kuona zvinogona kuitika zvirwere zvine chekuita nemoyo.
Zvekare, isu tinofanirwa kutaura nezvemushandisi weApple Watch, uyo akaona kuti nekuda kwechigadzirwa ichi akaonekwa aine chirwere chemwoyo. Mukoti Wepamba Beth Stamp nguva pfupi yadarika akatenga iyo Apple Watch yekukwezva kweiyo moyo-wakatarisana nehutano maficha Parizvino Beth yatove nezvakawanda kupfuura kururamisa mutengo waakabhadhara pairi.
Mukoti wemba yeBeth Stamps akaona kuti panguva yekushanya kwaakaita kumurwere kurova kwemoyo wake kwakawedzera zvinotyisa, sekunge anga apedza kumhanya nhangemutange uye haakwanise kuidzikisa kunyangwe akagara pasi kwechinguva kuti azorore. Panguva iyoyo, yake Apple Watch yakanga iine kurova kwemoyo kwema 177 beats paminiti. Nekukurumidza, vamwe vake vakazivisa ve emergency emergency uye akagamuchirwa muchipatara kwemazuva maviri achiedzwa.
Vanachiremba vakaongorora supraventricular tachycardia, chirwere chemoyo mutserendende chinoratidzwa nekukasira kwemoyo kurovera uko chiratidzo chemagetsi chinotangira mune auricoventricular node kana mune yemoyo atrium, sezvatinogona kuverenga muWikipedia.
Yakanga isiri nguva yekutanga kuti Beth aone kumhanya kwemoyo wake kwenguva pfupi, asi kwete Ndakaipa kukosha kwayainyatsoita, Kusvika Apple Watch yakurudzira kuti aende kuna chiremba kunoongororwa kuti aone hutano hwemwoyo wake, sezvo yainge yaona kuti chimwe chinhu chaisashanda nemazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mukadzi anoona kuti anotambura ne supraventricular tachycardia nekuda kweApple Watch
Apple inoshandura mazwi eBritish neAustralia eSiri
Beats inosuma nyowani nyowani yeBeats Sutdio 3 NBA Edition mahedhifoni